Khasaaraha duufaanka Gatis ee ku dhuftay Puntland | Berberanews.com
Home WARARKA Khasaaraha duufaanka Gatis ee ku dhuftay Puntland
Bosaso-(Berberanews)-Duufaan maalamo ka hor ay saadaalisay waaxda saadaasha hawada ee Soomaaliya kana digtay khasaare laxaad leh oo naf iyo maalba lihi ka dhalan karo, ayaa ku dhuftay xalay fiidkii xeebaha bari ee maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya.
Gebi ahaan ba waxa dabaylaha iyo roobabku gooyeen isgaadhsiintii telefoonnada ee aaggaas, laakiin BBC-da waxa u suurto galay in ay la xidhiidho gudoomiyaha degmada Xaafuun.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in khasaare badani gaadhay magaalada Xaafuun oo guryo badani dumeen, waxaanu sidoo kale xaqiijiyey in ilaa haatan sideed qof oo kalluumaysato Yemeniyiin ah maydkoodu ku soo caaryey xeebta iyo sidoo kale lix doonyood.
Ilaa haatan maamulka Puntland wax war ah kama soo saarin masiibadan, hase yeeshee gudoomiyaha hay’adda ka hortagga masiibooyinka oo ay BBC-du la xidhiidhay ayaa sheegay in ay saacadaha soo socda marka ay xog dhamays tiran helaan ay faahfaahin ka soo saari doonaan khasaaraha ka dhashay duufaanka.
Dhanka kale na wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa tibaaxaya in haatan roobab mahiigaanno ah oo dabaylo xoogle wataa magaalada iyo deegaannada ku hareeraysan ba ka da’ayaan, taasina ay sii kordhinayso cabdida laga qabo in duufaanku gaadhi karo aaggaas.
Previous articleItoobiya oo 72 saacadood u qabatay xoogaga TPLF
Next articleMadaxweyne Biden oo magacaabay tiro saraakiil